कैलाशको कुटी: ब्गलर मित्रहरुसँग अल्छी र दिक्कदारीको कुरा
मलाई मात्र अल्छि लाग्छ भनेको त, होइन सबै साथीलाई नै लाग्दो रहेछ, कैलाश बहिनीले यो चट्ट नुन, तेल, मसला अनि खोर्सानी मिलाएर तयार पार्नु भएको यो परिकार पहिला पढ्न पाउँदा अल्छि टाढा भएर भाग्यो। यो एउटा लेखाई मात्र नभै कैलाश बहिनीले दिएको सन्देश हो किनकि हामि अल्छि ले भौतारिरहेको बेला उहाँलाई अल्छि नलागी यसरी लेख्नु उहाँले दिनु भएको सन्देस हो हामिलाई।
म यो लेखको लागि धेरै धेरै धन्यबाद दिदैं फेरि फेरि पनि लेख्न नभुल्नु होला।
म अल्छि मान्दै नेटमा आको थिएँ, टुप्लुक्क थुप्रै ब्लगर साथीहरु लाइनमा भेंटे अनि ब्लग कै कुरामा अल्छि लाग्दै बहिनी कैलाश सँग लामो कुरा भयो, भन्दा पनि बहिनिले हामी गफगाफ गरेको समेत अल्छि नमानी प्रकाशन मा ल्याएर चकित बनाईदिनु भयो । साँच्चै भन्नु पर्दा बहिनी ले जहिले पनि नुन तेल मसला ले चट्ट परेको परिकार तयार पार्नु हुन्छ । जहिले पनि एकपल्ट छिर्ने गर्छु भोजपुरे ब्लग अप्डेट गर्दा । आज पनि यस्तै साईत जुर्‍यो, लहै बहिनी धन्यवाद जहिले पनि यसरी नै इस्वरले जोस् र जाँगर पैदा गराओस, यहीं कामना गर्दै बिदा लिन्छु अर्को अप्डेट हेर्न छिर्नेछु, त्यतिन्जेलको लागि जदौ ।
उहि बि जे बान्तवा भोजपुरे ब्लग
हैन , कैलाश जी - अल्छि लागेको कुरा भन्नु हुन्छ अनि कसरी यतिका चाख्लाग्दा कुराहरु जागर चलाएर नै पोस्ट गर्नुहुन्छ ? यो त जागर को कुरो'भो नि ! प्रसंग मात्रै अल्छि को कतै बल्छी त थाप'या होइन ? जेहोस अल्छिको कुरो अल्छि नमानिकन गर्नु भएको रहेछ ।
मैले हिजो मात्र फेस बुक मा - "आज शुक्रबार छुट्टिका दिन कसरी बिताउने हो कुनि ? योजना नै छैन" भनेर आफ्नो स्टाटसमा लेखेको थिए ब्लगर मित्र जोतारे धाइबाजी ले राम्रो पुस्तक पढेर शेयर गर्नु न भन्नु भएको रहेछ - त्यसो गर्न सकिएन अल्छि न परे सुतिएछ मज्जाले , अनि तपाईको अफ़लाइन मेसेज पनि हेरे उठेर । पकै आज केही गर्नु भयो होला भनेर ब्लग खोलिहेरेको त त्यहा पनी अल्छिकै कुरा उठाउनु भएको रहेछ । म त मलाई मात्र .....होला भनेको त !सबैलाई उस्तै ...सास्ती । अल्छि नभएको देखाउन यत्रो लामो जात्रा लेखे है , सरी है ।
यस्तै खालका अरु टाँसो राख्ने की नराख्ने ? भनेर सोध्नु भए को रहेछ के हो आफ्ना मीठा गफहरु सुनाउने मन छैन की क्या हो ? वास्तविकता र यथार्थ लेख्न माहिर हुनुहूनछ तपाई - लेख्दै जानुस । धन्यवाद !
वास्तवमा भन्नु पर्दा आल्छि पना बाटै ग्रसित भएर जागरको भकारि खोज्दै हिडने क्रममा साथिहरुको ब्लगको ढोका नै मेरो लागि आल्छिपनाको ओषधि हुने गर्दछ । जागरले थकाई नमारे प्रतिकृया पनि लेख्ने नभए पढेरै भएपनि छोडने ।
आजपनि त्यसैको उपचार गराउने क्रममा यसो कैलासजीको कुटिमा चियाउने प्रयास गरे । तर प्रसंगले बिल्कुलै नयाँ स्फुर्ति जनायो ।
अल्छिपनाको ग्रसित् स्थितिलाई पनि कैलाशजीले कस्तो जागरिलो स्वादमा पस्कनुभएको । स्वाद मानि मानि खाइयो ।अनि मनमनै आफुलाई पनि यसरि भलाकुसारि गर्ने दिन कहिले जुर्ने होला भन्ने बेगले पनि तान्न लाग्यो । सोचे जुर्ला नि कुनै दिन।
ल कैलाश् जी मिठो पोस्टको लागि धन्यबाद ।
कुटीमा अल्छी र दिग्दारीको कुरा आउँछ भन्ने थाहा भै सकेकोले होला र टाँसोको पात्र पनि भईएको छ भनेर समेत थाहा भै सकेकोले होला टाँसोको बारेमा प्रतिक्रिया लेख्न पो अलमल्ल परिएछ । जे होस् प्रस्तुतीमा नविनता दिनुभयो - पढ्दा आफैंलाई देखेपनि रमाईलो लाग्यो ।
कैलाश दिदिले अल्छिपना र दिक्दारीपना कसरी हटाउने गर्नुहुन्छ भनेर लेख्नुभएछ । उहाँ अल्छिपन भगाउन पो ब्लगीङ गर्नु हुन्छ भन्ने लाग्यो मलाइ त,तर यो कुरा भने लेख्न छुटाउनु भएछ । म नयाँ भएर हो कि ब्लगको मर्म नबुझेर या अलि साहित्यीक भाषा नबुझेर हो पढ्नु अगाडि जाँगर थियो पढिसकेपछि पो दिक्दारीले छोप्न खोज्यो मलाइ त
सबैको आ-आफ्नै बिचार र परिकल्पनाहरु पड्न पाईयो।अनि को-कस्ले के गर्नु हुदो रहेछ अल्छि लागेको बेलामा भन्ने पनि मजाले पड्न पाईयो।अब आफ्नो बारे भन्नु पर्दा अल्छि लाग्यो भनेआफु त मस्त सुत्ने हो एक निन्द्रा अनि जागे पछि देखा जाएगा!!
My simple answer would be go online and search for something worth reading.
What do you suggest me ;)
गजब पो भयो कैलाशजी । सधैं अरुहरुलाई नै निशाना साँधेर लेख्ने मान्छे मलाई नै सिकारमा एउटा पात्र बनाउनुभएछ ।
तर तपाईंको यो अल्छिपन हो कि के हो, अल्छिको बहानाम यसरी उपयोगी टाँसो लेख्नमा जाँगर पो चलाऊनु भयो ।
तपाईंको यस प्रयासले आम अल्छिपीडितहरुलाई गोरेटो पनि धेरै तवर्ले सुझाएको छ है । बरु धेरै जनसँग खोस्राखोश्री पार्दा तपाईंलाई पो दिक्कताको बेलामा झन् हैरानी भो ।
बेदनाथजीको सुझाबको लागि धन्यवाद। अनि सिकारुजी तपाई हामी छउञ्जेल त यस्ता भलाकुसारी चलाउन सकीहाल्छौ नि। अहिले पनि भलाकुसारी चलिराखेकै छ। स्वरुप मात्रै फरक छ। आउँदो दिनमा झपक्कै पार्दै जाउँला नि हुन्न?
बसन्त भाई (दिदी भनीसक्नु भो। त्यसैले भाई भन्न मन लाग्यो)यो टाँसो पढेपछि दिक्कदारीपनाले छोप्न खोजेछ। साधारणा कुरो हो यो। अचम्म मान्दिन म। अनि यो टाँसोकै लागि नयाँ पुरानो या ब्लगको मर्म र साहित्य बुझ्ने तपाईको दक्षताप्रति औँला उठाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन है। मेरो लागि सजिलो हुने, राम्रो लाग्ने कुरामामा अरुको पनि उस्तै विचार हुन्छ भन्ने हुँदैन। अनि अल्छीपन हटाउने ध्येयमा ब्लगिङ गर्ने स्टेजमा पुगेको छुईन म अहिलेसम्म। तर अल्छी लागेको बेलामा भयो भने ब्लगहरु चाहार्ने चाहि गर्छु म। अब उप्रान्त के होला के नहोला थाहा छैन।
Well, IT & Business Talkका मित्रको कुरा सही हो। स्रोत साधन र पहुँच भएसम्म किन त्यसो नगर्नु? मजाले गर्ने नि। तर लोडसेडिङको दिक्कदारीको मारले गर्दा मैले त्यतातिर खासै ध्यान नदिएको नि।
धाइवाजी यस्तै छ यहाँको चलन। मिलेमतोमै सही ढंगले हामी एकअर्काको निशाना बन्दै भलाकुसारी गर्दा एकआपसको सम्बन्धमा थप उर्जा मिल्छ नि त हैन? अनि यो पोष्टको निर्माणक्रम र यहाँ देखिइसकेपछि पनि हैरानी त सबैलाई भएकै हो नि। मात्रा र प्रकृति मात्रै भिन्न भएको होला।
सबैलाई बढिया धन्यवाद।
hana yo sabai laai bokaa banaaiye chha ni hau, kyaa gajaba
blogger haru laai nai baliko bokaa banaako dekhdaa chahi malai dherai ramaailo laagyo yastai gardai garnu hai kailaash didi. subhakamana
I REALY FELTENJOY TO READ OUT THIS TOPIC IN YOUR BLOG KAILAS JEE.tHANKS FOR YOUR ROMANTIC ARTICLE AND SORRY FOR WRITTEN IN ENGLISH BECAUSE NOW A DAYS MY PC HAVING UNIC CODE SOME ERROR.aNYWAY I ALSO LIKE TO LOOP OF THS BLOGGFER FOR FUTURE CORESPONDSE CAN YOU SEND YOUR ARTICLE TO ME FOR MY SMALL BLOG.
खोइ मलाई त अल्छि लागेको बेला ईन्टरनेट खोल्ने गर्छु अनि एस्तै ब्लग चाहार्ने गरेको छु, मलाई अरुहरुको सस्मरण पढ्न भनेपछी निकै जागर चलेर आउछ है नढाटी भन्नु पर्दा, ड्युटी मै रहदा र काम गरिरहदा पनि अल्छि लागेको र झन्झट लागेको बेलामा म ब्लग खोली हाल्छु, तर मलाई अन्य ब्ल्गहरु हेर्ने त कहिले भ्याउनु र खोइ, साच्चै भन्नु पर्दा म उमेश जि को माइ संसार र नेपाल प्लस लाई कहिले पनि छुटाउदिन तर अस्तिमात्र यो तपाईंको कुटिको दर्शन पाउन सके तब मलाई त न्वारन देखीको जागर पो चलेको छ त। यहाँ बाट भित्र थुप्रै ब्लगहरु भेटिए पनि म त यो कुटिमै अल्मली रहेको छु, म मेरो अल्छिपनाले हो कि एतिको बेफुर्सदिलो बनाएको............l